पृथ्वीनारायण शाहले उपत्यका जितेपछि राखेको गुठी « रिपोर्टर्स नेपाल
रिपोर्टर्स नेपाल, २६ पौष । नेपाल एकीकरण गर्ने पृथ्वीनारायण शाह साहसी मात्र थिएनन् दानवीर पनि थिए । राम्रो संस्कार, संस्कृतिक र प्रथालाई सम्मान मात्र गर्दैनथिए आफैमाथि लागू गर्थे । काठमाडौं उपत्यकालगायत देशका मुख्य शहरहरुमा चल्दै आएको गुठी प्रथा अँगिकार गरे ।
मल्ल राजाहरुका पालामा धेरै गुठी स्थापना गरिए । गुठी विस्तारमा मल्लकाल स्वर्णी मानिन्छ । नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा बढी सांस्कृतिक धरोहर निर्माण गर्नेमा मल्ल राजाहरु थिए । सबैभन्दा धेरै जात्रा पर्व पनि मल्लकालमा शुरु गरिए ।
नेकपा फुटे सत्ता पक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी को ?
काठमाडौं, २३ असार । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी फुटको संघारमा छ । फुट जोगाउन नेताहरुबीच अन्तिम
खुमलटारमा ६ भाई भेला, अब के होला ?
काठमाडौं, २३ असार । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, बरिष्ठ